‘कुम्भ करण’मा कस्को पछि को ? प्रोमो हेर्नुस् « Ramailo छ
‘कुम्भ करण’मा कस्को पछि को ? प्रोमो हेर्नुस्
प्रकाशित मिति : May 20, 2018
फिल्म ‘कुम्भ करण’ को ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ । दिपक ओली निर्देशित फिल्मको ट्रेलरमा कमेडी र सस्पेन्स पक्षलाई देखाइएको छ । असार २२ गतेलाई प्रदर्शन मिति तोकिएको ‘कुम्भ करण’को प्रोमो यस्तो छ :
‘कुम्भ करण’मा नायिका निशा अधिकारी, भोलाराज सापकोटा, गौरव पहारी, अभय बराल, आकाश पल, कुलदीप अधिकारी, कमल गाउले, प्रतिभा क्षेत्री, सदभाव थापाको अभिनय छ । शिक्षिकाको वरिपरि घुमेको ट्रेलरबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
आकाश पल इन्टरटेनमेन्टको व्यानरमा निर्मित फिल्मका निर्माता चित्रबहादुर घर्तिमगर र क्षितिज बस्नेत हुन् भने सहनिर्मातामा गिरप्रसाद घर्तिमगर र विजय श्रेष्ठ छन् । त्यस्तै कार्यकारी निर्मातामा रोम ओली र चुपनिधि रिजाल रहेका छन् ।
असार २२ गते रिलिज हुने ‘कुम्भ करण’मा महेश दवाडीको कथारपटकथारसंवाद, हरि घले लामाको छायाँकन, मिलन श्रेष्ठको सम्पादन र गोविन्द मधुर आचार्यको संगीत छ ।